Onu ahia SNCB ụgbọ oloko na ego ahia | Chekwa ụgbọ oloko
Onu ahia SNCB ụgbọ oloko na ego ahia
Ụlọ > Onu ahia SNCB ụgbọ oloko na ego ahia
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Ohere SNCB ụgbọ okporo ígwè na SNCB ahịa njem na uru.
isiokwu: 1. SNCB site Train Isi
2. Banyere SNCB 3. Top Insights Inweta Cheap SNCB Train Ticket
4. Ego ole ka SNCB tiketi na-eri 5. Kedu ihe kpatara ọ ka mma iji were ụgbọ oloko SNCB, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche na klaasị mbụ na nke abụọ? 7. Enwere ndenye aha SNCB
8. Ogologo oge tupu njem nke SNCB ịbịaru 9. Kedu oge usoro ụgbọ oloko SNCB
10. Kedu ọdụ ndị SNCB na-eje ozi 11. SNCB Ajụjụ
SNCB site Train Isi
Trainlọ ọrụ ụgbọ oloko mba, SNCB, na-eje ozi 244 nde ndị njem kwa afọ.
Kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ ụgbọ oloko mba na-ewe 61 puku mmadụ n'ime Belgium na ebe ha na-aga Europe.
Companylọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè mba bụ onye na-ahụ maka ọrụ agagharị na Belgium na mba ahụ.
Trainlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè National Train nke Belgium, SNCB, e guzobere na 1926.
SNCB na-enye ọrụ ụgbọ okporo ígwè n'ime Belgium na gafere Europe. Na tiketi ziri ezi, ị nwere ike ịga niile kachasị mma ebe ezumike na Europe. Na tiketi dị iche iche na ntinye aha kaadị, SNCB na-egbo mkpa onye ọ bụla.
Tragbọ oloko Ugboro na Brussels – Ghent, Antwerp – eji, Brussels – Namur. Nwekwara ike ịga mba ndị agbata obi gị na Europe site na iji ụgbọ oloko SNCB.
Gburugburu ụlọ ọrụ ahụ, nso 20,000 ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ngbanye ụgbọ ala na-ahụ na ndị njem na-erute ebe ha na-aga kwa ụbọchị.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ na-azụ tiketi maka SNCB
– Zọpụta A Train iPhone iOS App
Top Insights Inweta Cheap SNCB Train Ticket
Nọmba 1: Dezie tiketi SNCB gị tupu oge ị nwere ike
Pricegwọ nke SNCB gbaa ụgbọ okporo ígwè na-ebili ka ụbọchị njem na-eru nso. Nwere ike ịzọpụta onwe gị ụfọdụ ego site ntinye akwụkwọ gị SNCB gbaa ụgbọ okporo ígwè dị ka o kwere si ọpụpụ ụbọchị. SNCB gbaa ụgbọ oloko dị dị ka mmalite dị ka 3 ka 6 ọnwa tupu njem ụgbọ oloko aga. Ntinye akwụkwọ na mbido na-eme ka ị nweta tiketi ụgbọ oloko SNCB kachasị ọnụ ahịa. Onu ha na onu ogugu, ya mere ngwa ngwa ị nyere iwu, dị ọnụ ala karịa maka gị. Iji chekwaa ego na tiketi ụgbọ oloko SNCB, zụta gị tiketi ASAP.
Nọmba 2: Njem SNCB na-eme njem n'oge oge kachasị elu
SNCB gbaa ụgbọ okporo ígwè dị ọnụ ala n'oge oge kachasị elu, na mmalite nke izu, na n'ehihie. Can nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ime izu. Na tusde, Wenezde, na Tọzdee, SNCB gbaa ụgbọ okporo ígwè bụ ndị kasị echekwa. N'ihi olu nke ndị njem azụmaahịa na-aga ọrụ n'ụtụtụ na mgbede, gbaa ụgbọ okporo ígwè na-akwụ ụgwọ karịa n'oge awa ndị ahụ. Ọ dị ọnụ ala karịa njem oge ọ bụla n'etiti ụtụtụ na tupu mgbede na-aga njem. Oge ngwụsị izu bụ oge ọzọ kachasị elu maka ụgbọ oloko, tumadi na Fraịdee na Satọde. Ọnụahịa ụgbọ oloko SNCB na-arịwanye elu ezumike ọha na eze na ezumike ụlọ akwụkwọ.
Nọmba 3: Nye tiketi gị maka SNCB mgbe ị ji n'aka usoro njem gị
Cgbọ oloko SNCB na-achọsi ike, na obere asọmpi, ha ugbu a-anọgide n'elu nhọrọ maka ụgbọ oloko na Belgium. SNCB nwere ike ịtọ ntọala mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke gbochiri mgbanwe tiketi ma ọ bụ nkwụghachi belụsọ ma ọ bụ ụdị azụmaahịa azụmahịa. Ọ bụ ezie na a ka nwere ebe nrụọrụ weebụ na ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike ire ndị mmadụ aka gị tiketi, SNCB anaghị ekwe ka ire ere tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye iwu tiketi gị naanị mgbe ị ji n'aka na usoro oge ị ga --echebe gị ịmebe otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara na ịnweghị ike iji tiketi mbụ..
Nọmba 4: Zụta gị SNCB tiketi na Save A Train
Chekwaa Tragbọ oloko nwere nke kasịnụ, nke kacha mma, na nkwekọrịta dị ọnụ ala maka tiketi ụgbọ oloko na Europe. Mmekọrịta anyị na ọtụtụ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè, isi mmalite ụgbọ oloko, na ihe ọmụma anyị banyere teknụzụ algorithms na-enye Save A Train ohere ka ọnụ ahịa ụgbọ oloko dị ọnụ ala. Anyị na-adịghị nnọọ na-enye ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè azụmahịa amụọ maka SNCB naanị; anyị na-enye otu ihe ahụ maka ihe ndị ọzọ na SNCB ma anyị na-anya isi na ndị ahịa kacha mma n'ahịa ụgbọ okporo ígwè.
Brussels ka Antwerp Zụọ Ahịa
Amsterdam na Antwerp Train Prices
Lille na ọnụahịa ụgbọ oloko Antwerp
Paris na Antwerp Zụọ Ahịa
Ego ole ka SNCB tiketi na-eri?
Tiketi SNCB na-amalite site na ,5 2,5 ruo dị ka as 20 maka otu njem ụgbọ oloko. Nke ọnụahịa nke tiketi ụgbọ oloko SNCB dabere na ụdị tiketi ịzụrụ na mgbe ịchọrọ ịga njem:
Ọkọlọtọ € 2,50 – € 15.00 € 15 – € 30
Klaasị mbụ € 10.50 – € 20 € 21 – € 46
Kedu ihe kpatara ọ ka mma iji were ụgbọ oloko SNCB, gharakwa njem ụgbọelu
1) You rute na etiti obodo. Nke a bụ otu uru ụgbọ oloko SNCB ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu. SNCB ụgbọ oloko na ndị ọzọ niile ụgbọ okporo ígwè njem site n'ebe ọ bụla obodo na etiti nke obodo na-esote. Ọ na-azọpụta gị oge na ọnụ ahịa nke cab si ọdụ ụgbọ elu na etiti obodo. Na ụgbọ oloko na-akwụsị, ọ dị mfe ịnweta ebe ọ bụla n'obodo ị na-aga. Ọ baghị uru ebe ị na-esi, Brussels, Antwerp, eji, ma ọ bụ Liege, nkwụsị obodo na-akwụsị bụ isi uru nke ụgbọ oloko SNCB!
2) Iji ụgbọ elu na-eme njem chọrọ ka ị nọrọ ọdụ ụgbọ elu ọbụlagodi ọtụtụ elekere tupu oge ụgbọ elu gị. Dkwesiri ịga n'ihu na nyocha nche tupu ikwenye gị ịbanye ụgbọelu. Na ụgbọ oloko SNCB, ị ga-anọ ọdụ n'ọdụ ụgbọ erughị 30 Nkeji oge. Mgbe ị tụlere oge ọ ga-ewe gị iji si ọdụ ụgbọ elu gaa etiti obodo ahụ, ị ga-achọpụta na ụgbọ oloko SNCB ka mma maka usoro ngụkọta oge njem.
3) N'elu elu, ọnụahịa nke ụgbọ okporo ígwè SNCB yiri ka ọ dị ọnụ karịa tiketi ụgbọelu nke mmefu ego. Otú ọ dị, mgbe ị tụlere ebubo niile metụtara ya, SNCB gbaa ụgbọ okporo ígwè nwere ọnụahịa ahịa ka mma. Na ụgwọ ndị ọzọ dịka ụgwọ akpa ị na-agaghị akwụ ụgwọ n'ụgbọ oloko, njem site SNCB bụ n'ezie ihe kacha mma.
4) Gbọ oloko na-adọrọ mmasị na gburugburu ebe obibi mgbe ị na-atụle ụgbọ oloko na ụgbọ elu, insgbọ oloko na-apụta n’elu. Gbọ elu ikuku na-emebi ikuku dị elu site na carbon dị elu ha na-enye. Tragbọ oloko na tụnyere enye si ukwuu obere mmetọ carbon karịa ụgbọ elu.
Kedu ihe dị iche na klaasị mbụ na nke abụọ?
E nwere klas dị iche iche nke tiketi SNCB maka ego dị iche iche na ụdị ndị njem. Nwere ike ịzụta tiketi ọkọlọtọ maka klas nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ. Dị ka ọmụmaatụ, klaasị 2 ga-adabara mma maka ogologo njem na mmefu ego njem. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-agbatị ụkwụ gị ma ọ bụ na ị bụ a azụmahịa njem na ịchọrọ ịrụ ọrụ mgbe ị na-eme njem, mgbe 1st klas dị mma maka gị.
Enwere ndenye aha SNCB?
Maka ụmụ amaala Belgium, enwere ụdị ndenye aha dị iche iche, tiketi Unlimited oge, na Ọkọlọtọ Oge. Maka Internationals anyị na-atụ aro ịzụrụ ogologo oge n'ọdịnihu wee nwee nhọrọ dị ọnụ ala karịa.
Enwere ike ịzụta kaadị abụọ na:
– SNCB tiketi counters.
– SNCB ngwa.
Ọkọlọtọ SNCB Tiketi:
Akwụkwọ ọkọlọtọ bụ tiketi ụgbọ okporo ígwè na-agbanwe agbanwe nke SNCB na-enye. N'ihi ya, ị nwere ike ịga ọ bụla na Belgium na ọkọlọtọ ụgbọ okporo ígwè tiketi. I kwesiri iburu n’uche na tiketi a zụtara na ntanetị, enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na agbanweela atụmatụ, i nwere ike nkwụghachi ma ọ bụ gbanwee tiketi na tiketi counters. Na mgbakwunye, ọrụ a dị, otu ụbọchị tupu ụbọchị ọpụpụ gị, ma ọ bụ maka 30 Nkeji ole na ole mgbe ịzụtara tiketi ahụ.
Tiketi Ezinaụlọ buru ibu
Ndị otu ezi-na-ụlọ niile nwere ike ịnụ ụtọ nnukwu ụgwọ na tiketi SNCB. Ọmụmaatụ, ụmụaka n'okpuru 12 njem njem n'efu, wee ruo 50% na akara tiketi maka ndị okenye na ụmụaka 12. Ọzọkwa, ji tiketi a, ị nwere ike ịga njem na ụgbọ oloko SNCB niile.
Kaadị a dị irè yana kaadi njirimara foto, nke kwesịrị ịgụnye afọ onye nwere ya.
Seasonkpụrụ tiketi Oge
Citizensmụ amaala Belgium nwere ike ịzụta tiketi Oge Oge, na-enwe na-akparaghị ókè njem na otu ụzọ. Yabụ, maka ego nke 10 ndenye aha ọnwa, ha nwere ike ịga njem n’akụkụ abụọ a ka ha chọrọ.
Tiketi izu ụka
Izu ụka izu ụka dị irè Friday-Sunday, na a 50% nwepu ego na ebe obula na Belgium. Ya mere, malite na 7 pm na Fraịde, ị nwere ike ịga ebe ọ bụla gafee Belgium, na klas nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ. Na mgbakwunye, a pụrụ iche okwu ịgbatị na oge ezumike ọha dị ka nke ọma.
Brussels ka Gent Zụọ Ahịa
Antwerp na Ghent ụgbọ oloko Ahịa
Halle to Ghent Train Ahịa
Bruges ka Gent Train Ahịa
Ogologo oge tupu njem nke SNCB ịbịaru?
O siri ike n’ụzọ ziri ezi, ma Save A Train na-adụ ọdụ ka ị bịarute 30 nkeji oge tupu ọpụpụ gị. Na oge a, ga-enwekwa oge zuru ezu iji zụọ ihe maka ihe ndị ịchọrọ mee ụgbọ oloko gị dị ka ala dị ka o kwere mee.
Kedu oge usoro ụgbọ oloko SNCB?
Nwere ike ịchọpụta n’oge-dị na peeji nke anyị Chekwa ụgbọ oloko usoro iheomume SNCB, Dị pịnye ebe ị nọ ugbu a na ebe ịchọrọ ịchọrọ, anyị ga-egosi gị ozi ahụ.
Brussels na liiege Train Ahịa
Kedu ọdụ ndị SNCB na-eje ozi?
Brusselslọ ọrụ Brussels nke SNCB bụ Brussels – Central, nke dị n’etiti Belgium.
Centrallọ ọrụ SNCB ọzọ dị na Antwerp, Cgbọ oloko SNCB pụọ ma si Antwerp Central Station, nso ụlọ nkwari akụ Blue Astrid mara mma. Antwerp Central bu nke abụọ ọdụ ụgbọ oloko na Belgium.
Cgbọ oloko SNCB na Ghent si na Ghent Saint Pieters ebe, nke bụ obodo nke atọ kacha ibu na Belgium na nke kacha ibu na Flanders.
Liège, Liège Guillemins bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè SNCB. Ya mere, Liege ọdụ ụgbọ oloko na-ejikọ Belgium na mba ndị agbata obi, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-ekwo ekwo na Wallonia. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Germany, France, Luxembourg, ma ọ bụ Netherlands site na Belgium, Ọ kara gị mma idobe tiketi ụgbọ oloko SNCB gị nke ọma tupu oge eruo.
eji (Brugge – Otu aha obodo ahụ n’asụsụ ọzọ a ma ama) ụgbọ okporo ígwè bụ ọzọ ụgbọ okporo ígwè SNCB ụgbọ okporo ígwè na Flanders. Ọmụmaatụ, si Bruges, ị nwere ike ịtụ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi ndị ọzọ ewu ewu na ebe na Belgium: Ghent, Antwerp, na Brussels n’ime ihe na-erughị otu awa. The Bruges ụgbọ okporo ígwè bụ na a 20 nkeji na-eje ije n'ebe dị anya site na etiti obodo, na ebe mara mma Old City Markt.
SNgbọ okporo ígwè SNCB dị na Leuven bụ isi ụgbọ okporo ígwè na Flemish Brabant mpaghara na Belgium. Busygbọ okporo ígwè a na-arụsi ọrụ ike na-ejikọ mpaghara Flemish na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ otu n'ime elu 5 ebe ụgbọ okporo ígwè na-ekwo ekwo na Belgium. N'ihi ya, ị nwere ike ụgbọ okporo ígwè njem na Brussels, Ọdụ ụgbọ elu Brussels, Leuven, Antwerp, na ihu ọma obodo ọ bụla dị na Belgium.
Mechelen ma ọ bụ Malinas, n'obodo Mechelen, bụkwa otu n'ime ọdụ ụgbọ okporo ígwè SNCB dị na Belgium. You ga-ahụ ebe a 10 nyiwe, na-eje ozi Intercity ụgbọ okporo ígwè, gụnyere Brussels Airport si Antwerp. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịzụta tiketi SNCB gị na Amsterdam, na Luxembourg, site na Antwerp na Brussels.
Na-enye ohere ka ha dochie bọọdụ SNCB insgbọ oloko?
A na-ahapụ ụgbọ ịnyịnya na ụgbọ oloko SNCB. Ọ bụrụ na ị nwere igwe eji agba ọsọ, mgbe ahụ i nwere ike ịbanye na ụgbọ oloko, n’anaghị akwụ ụgwọ. Otú ọ dị, ndị ọzọ ụdị anyịnya igwe ga-eri gị a € 4 emeju gị ụgbọ okporo ígwè tiketi.
Childrenmụaka Na-eme njem na ongbọ oloko SNCB?
Ee, kama ọ bụ naanị ruo otu afọ. Umuaka ndi nke obere 12 ga-eme njem n'efu mgbe gị na onye njem toro eto na-esonyere.
Na-anu ulo na-ekwe na SNCB insgbọ oloko?
Ee, i nwere ike na-ewetara gị Pita na ụgbọ okporo ígwè, maka € 3 kwa njem. Otú ọ dị, ahụrụ n'anya kwesịrị ịnọ na ndu ma ọ bụ na akpa, ma ọ bụ nkata.
Kedu usoro usoro nnabata maka SNCB?
Fọdụ ọdụ ụgbọ elu nwere ngosi elektrọnik nke na-ekpughe nguzo nke ụgbọ oloko ahụ. Ọzọkwa, jiri ihe ndị a lelee mpaghara ebe nọmba nchịkwa ụgbọ oloko ga-adị mgbe ụgbọ oloko biara.
Ọtụtụ rịọrọ SNCB FAQ – Ka m kwesịrị ịtụ oche tupu oge eruo na SNCB?
ị nwere ike idobere a ama mna n'ọdịnihu na ụlọ SNCB ụgbọ oloko. ị uche nweta onwe ọdụ mgbe ịmechara ndoputa, mana nke a abụghị iwu.
Enwere intaneti Wi-Fi n'ime SNCB?
Mba. Enweghị N'efu Wi-Fi ịntanetị na ụgbọ oloko SNCB. Nwere ike ịnụ ụtọ Wi-Fi na ọdụ ụgbọ okporo ígwè SNCB.
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, ugbu a ị maara ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko SNCB gị ma dị njikere ịzụta tiketi ụgbọ oloko SNCB gị Chekwa ụgbọ oloko.
NSB V nke Norway SBB Switzerland
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ma ị nwere ike ịgbanwe / fr ka / nl ma ọ bụ / es na ọtụtụ asụsụ.